गुराँस लाईफको बीमा कोष छ अर्ब नजिक, नाफा र बीमा शुल्क कति ? – Insurance Khabar
गुराँस लाईफको बीमा कोष छ अर्ब नजिक, नाफा र बीमा शुल्क कति ?
प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:३३
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले एक अर्ब ९२ करोड ४२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ५३ करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
कम्पनीले समिक्षा अवधिको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ४० करोड ५९ लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २४ करोड ४१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले एक हजार १२८ वटा दाबीको दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ९७८ वटा दाबीको दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
चौथो त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम ३१ लख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले २४ वटा दाबी भुक्तानी गरेको छैन् ।
कम्पनीको जगेडा कोष २७ करोड ९३ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोषमा २२ करोड ८३ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी भने ९२ करोड ९४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरु वित्तीय विवरणमा महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्ने जीवन बीमा कोषमा पाँच अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९० हजार ९२४ रुपैयाँ रहेको छ । गत आबको तुलनामा चार अर्ब २३ करोड १९ लाख १३ हजार ११९ रुपैयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीले ७ करोड ६४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवमा कम्पनीले चार करोड एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी आठ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ भने कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ एक सय ३३ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ । त्यस्तै प्रतिशेयर सम्पत्ति अनुपात ८२० रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ ।